Nidaamka caafimaadka dalku uma diyaarsana xaalado dagaal iyo qalalaase - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Laanta qalliinka ee cusbitalka Huddinge. Dhakhaatiir ku howlan qalliin xiidmaha. sawir: Magnus Neideman / SvD / TT
Nidaamka caafimaadka dalku uma diyaarsana xaalado dagaal iyo qalalaase
La cusbooneeyay fredag 15 december 2017 kl 10.46
La daabacay fredag 15 december 2017 kl 08.46
Xaaladda uu maanta ku sugan yahay nidaamka milateri ee dar-yeelka caafimaad ayay ku adkaan lahayd siduu u maareeyn lahaa haddii uu dalku galo xaalad dagaal ama weerar aan ballaarnayn oo wata weerar dhanka war-bixinta teknikada, waxa loo yaqaanno IT, sida war-bixin lagu sheegay.
Caqabadaha hor taagan ayey ka mid yihiin shaqaalaha oo aan u diyaarsaneyn aqoon ahaan, waxaa sahlan awoodda lagu daadgureeyn lahaa dadka ku dhaawacma iyo daawada oo dhamaan karta.
Waxaa intaa dheer iney cusbitaalladu buux dhaafaan oo ay howlaha joojiyaan.
–Waa xaalad dhibaato halis ah howlaha oo istaaga, korontada, biyaha oo la waayo iyo caqabad la soo gudboonaata nidaamka war-bixinta teknoloojiyada iyo nidaamka digitaalka. Dhammaan waxyaabahaasi waxey gun-dhig u yihiin sidii ey ku socon lahaayeen howlaha cusbitaallada, sida uu sheegay Claes Ivgren, madaxa laanta difaaca caafimaadka ee wasaaradda gaashaan-dhigga.
–Intaa waxaa dheer halistka ah in cusbitalka uu dhaawac ka soo gaari karo weerarka, sida uu sheegay.
Waa howl war-bixin ey wada jir u soo saareen hayadda hoggaanka bulshada, Socialstyrelsen iyo wasaaradda gaashaan-dhigga ee salka ku haya awoodda hoos u dhacday ee dar-yeelka caafimaad haddii ay dalka soo wajahdo tusaale ahaan xaalad dagaal oo ey weheliyaan weerarro soo noqnoqda ee nidaamka It-ga – war-bixinta teknoloojiyada.
Wasaaradda gaashaan-dhigga ayaa wixii ka dambeeyey dhammaadkii dagaalkii qaboobaa waxay baabi’isay qaar badan oo ka mid ah howlaheedii awoodeed ee dar-yeelka caafimaad, iyadoona ey goobaha caafimaadka bulshadu la wareegeen dar-yeelka howl-wadeennada wasaaradda difaaca ee dhaawacyada culusi la soo gudboonaadaan, waana mid uu iminkaba culeeys ballaarani saaran yahay.
Shaqaalaha dar-yeelka caafimaad oo aan aqoon u laheyn howlaha dar-yeelka caafimaad ee xaaladaha dagaal, dhaawacyo badan ee culculus ee loo baahan yahay sidii loo waaridi lahaa iyo in maanta dibadda looga soo waarido oo aaney ka maarmin qalab badan hayadaha dar-yeelka caafimaad, sida war-bixinta lagu sheegay. Sababtaa daraadeed uu keeydka yar ee dawooyinku suuli karo.
–Waa in wax laga badalo middaa, sida ay sheegtay Johanna Sandwall, ahna sarkaaladda hayadda hoggaanka bulshada u qaabil-san u diyaargarowga dagaal.
–Bulshadu waa iney ka sii hagaagto. Kuma dhaqmi karno oo keliya xilliga loo baahdo in wax walba la soo waarido. Waxaa sidoo kale loo baahan yahay in aanu dib u hananno aqoonta dar-yeelka caafimaad ee xaaladaha dagaal, aqoonta qalliinka xilliga dagaal, ina lagu howl-galo qalab yari oo la awoodo in wax la kala qiimeeyn karo, sida ay sheegtay Johanna Sandwall.
War-bixinta ayaa sidoo kale farta ku fiiqeeysa suurtagallo xal loogu heli karo.
Wasaaradda gaashaan-dhigga ayaa u baahan tusaale ahaan inay soo iibsato oo uu gacanteeda ku sugan yahay laba cusbitaal ee goobo dagaal iyo shaqaalaha dar-yeelka caafimaad iney ku socdaali karaan dayuurradaha qumaatiga u kaca ee wax lagu daad gureeyo oo aan laheyn qalab caafimaad.
In la hagaajiyo xiriirka wada shaqeeyn ee wasaaradda gaashaan-dhigga iyo hayad-goboleedka caafimaad, isla markaana la adkeeyo ammaanka cusbitaallada.
Qorshooyinkan ayaa tallaabada ugu horreeysa waxaa la rajeeyneyaa inuu ku kici doono 1,2 bilyan oo koronka iswiidhishka marka laga reebo miisaaniyadda ku kici doonta is-bedellada loo baahan yahay in lagu sameeyo hayad goboleedyada caafimaadka landstingen.
–Aad ayey u adag tahay in la qiimeeyo. Keliya haqab-tirka dawooyinka ayaa kharash ballaaran ku kici doona, inkasta oo iminka la miisaaniyad gelin doono, sida ay sheegtay Johanna Sandwall.
Toddobaadka foodda innagu soo haya ayuu guddiga diyaargarowga difaacu soo ban-dhigi doonaa war-bixin la xiriirta sidii loo adkeeyn lahaa dhammaan howlaha difaaca oo caafimaadkuna ka mid yahay.